Laacibkii hore ee xulka qaranka Germany oo ku eedeeyay Guardiola hoos u dhaca ku yimid wiilasha Joachim Löw – Gool FM
(Germany) 18 Nof 2018. Laacibkii hore xulka qaranka Germany Hans-Peter Briegel ayaa xaqiijiyay in hoos u dhaca ku yimid xulka qaranka uu sabab buuxda u yahay Pep Guardiola, sababa la xiriira qaab ciyaareedkii uu ku tiirsanaa waqtigii uu macalinka ka ahaa Bern Munich.
Xulka qaranka Germany ayaa ku yimid hoos u dhac weyn tan iyo koobkii aduunka 2018 ee lagu qabtay dalka Russia, mana jiro wax isbadal muuqda ee ku aadan qaab ciyaareedkooda.
Hadaba Hans-Peter Briegel ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay xaalada uu haatan ku sugan yahay xulka qaranka Germany wuxuuna yiri:
“Marka uu Pep Guardiola yimid Bern Munich, kubad heysashadu ayaa waxay gaartay 75%, waana in kaga filan guusha”.
“Kubad heysashada kuuma suuragalineyso inaad ku guuleysato koobab iyo tartamo kala duwan, waxaana tusaalaha ugu weyn ee kugu filan uu yahay koobkii aduunka 2018 uu dhawaan ku guuleestay xulka qaranka France”.
“Xulka qaranka Germany waa inuu dib ugu soo laabtaa waqtiyadiisii hore iyo caadooyinkiisa, marka loo fiiriyo qaabka loo ciyaaro, muhiimada waa dheeli tirnaanta gudaha garoonka, ee ma ahan in loo ciyaaro si quruxbadan, balse dhibaatadan oo kale waxay soo martaa xul kasta ee qaran”.
“Unai Emery waa macalin cajiib ah, sababtoo ah waxaan u ciyaareynaa si ka duwan sidii hore” - Granit Xhaka
Maxamed Saalax ayaa SABAB u ah ILINTII ka Qubatay Sadio Mane....(Laacibka Liverpool oo la Aamusin waayay) Sidee wax u jiraan????